Home » اعمال تجاريه عبر الانترنت
09.05.2020 Category: اعمال تجاريه عبر الانترنت
Dhammaadkii bishii Juun، ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30،000 bishiiba kaliya ka soo buugaagta Kindle.
Bishii Abriil، Forbes ayaa ka warbixisay qoraaga iskiis u sameeyay Mark Dawson. Dawson wuxuu qoraa buugaag wax ku qori kara dambiyada. لاكين ، تاسي ماهان شيخادا ضابطة آه هلكان. Wuu sameeyaa $ 450،000 sano ah buugaagtaas.
Waxaa jira qorayaal kale oo badan oo ka yimaada meelo dhowr ah oo bil walba ah illaa dhowr kun oo doolar bishii. Iyada oo sahlanaanta daabacaadda buuga elektarooniga ah ee Amazon، waa hubaal aagagga ay kuwa doonaya in ay galaan boggooda waa in ay eegaan.
2 خصب قجوما آحاد عناد بوق قرطو
3 Buug cajiib آه
5 كو سو قادو أمازون
في kasta oo aadan awood u yeelan karin inaad have iyo jeer saadaaliso intaad ku sameyn laheyd boqortooyooyinka، mid ka mid ah furayaasha si aad lacag ugu uruuriso bartaada blogka ayaa ah inaad abuurto durdurro badan oo dakhli oo laga.
Buugagtu waa dakhli hadhaaga ah. Buugga hal mar aya qoraysaa، waadna sameyneysaa، gelineysaa، waxayna lacag kuu dhiganeysaa illaa iyo inta la iibinayo. In kasta oo ay waxyar ka sii badan tahay (waxaad u baahan doontaa inaad ugu yaraan marmarka qaarkood dhiirrigeliso buugga)، taasi waa aasaaska aasaasiga ah.
خصب قجوما آحاد عناد بوق قرطو
Mid ka mid ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan barta blogka waa inaad bilaabi doontaa inaad ururiso waxyaabo badan oo waqti ka badan. Waxaad si sahlan u bilaabi kartaa in aad kala soocdo sheekooyinka ku jira qaybaha oo ay ku wada xidhaan hagayaal iyo buugaag.
Dooro mowduuc. Tusaale ahaan، haddii aan rabay inaan xiro qaar ka mid ah fariimahayga ku yaal Guriga Caruurta، waxaan dooran karaa mawduuca "Macmacaanka خالية من الغلوتين". Waxaan markaa ka raadin karaa koobab ku saabsan qaybtaas، fiiri waxa soo baxay، oo laga yaabo inuu ku daror ka mid ah kuwa u gaarka ah iyo talooyin qaar akhristhrashaasha oo ku dhejiya buay loogu kindu tal.
Ka dhig mawduuc balaadhan. Haddii aad rabto buug weyn، waxaad dooran kartaa mawduuc balaadhan. Tusaale ahaan، haddii Jerry doonayo، wuxuu abuuri karaa buug loogu talagalay WHSR "Talooyinka qoraalka ee loogu talagalay dadka cusub". Wuxuu horey u leeyahay hage weyn si uu u bilaabo aasaaska buugiisa. Wuxuu markaa kaftamayaa marwalba qoraallada loogu talagalay talooyinka ugu muhiimsan oo ay wadaagaan.
Buug cajiib آه
Si kastaba ha noqotee، haddii aad rabto inaad bixiso buug gaar ah، waxaad mararka qaoodood qabsan kartaa niche in qofna uusan horay u qorin iyo inuu helo dhageystayaal cusub labadaba buugtaada iyo bloggaaga.
Waqti ku bixi inaad ku baarto buugaagta la heli karo ee mawduucaaga ah. Maxaa aan la daboolin؟ Maxaad ku dari lahayd?
Hubi inaad isticmaashid qoraal wanaagsan Qabso xiisaha akhristaha. Waxaad doonaysaa in akhristayaashu soo noqdaan oo ay soo iibsadaan buugaga soo socda.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xisaab si aad ugu daabacdo Kindle على الأمازون. Hase yeeshee، furashada xisaabtu waa bilaash.
Marka ay timaado ebooks، qaabka ugu fudud ayaa ka sii fiican. Isku day inaad ku dhejiso font aasaaska ah oo ka fogow wax kasta oo wata qoraal ama muuqaallo. Haa، xitaa cinwaanka. Kaliya كان iyo jeer uma tarjunto si fiican qaab ebook ah.
Xulo labo isugeyn laba jibbaar leh ama mid isku mid ah labo boos oo u dhexeeya cutubyada.
Ilaa aad qoreysid buug carruurta، iskuday inaad ku dhejiso qoraalka. Marka hore، haddii aad dooratid ikhtiyaarka 70٪ ee daqligaaga (inbadan oo ku saabsan tan daqiiqad gudaheed)، waxaa lagugu soo dallaci doonaa sida buuggaagu u weyn yahay. Sawirraduhu wii sii ballacayaan faylka.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa KDP bilaash، laakiin waa inaad bixisaa macluumaad shakhsi ahaaneed ujeedooyin canshuureed iyo inaad hesho lacag.
كو سو قادو أمازون
Si toos ah u tag bogga internetka ee daabacaadda Kindle Direct (KDP)
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu Sameynayaa 30,000 $ bishiiba kaliya
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30 000 bishiiba
Canle Kindle Books ma siin kartaa daaqad kale oo dakhliga kale ee блогъри?
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30.000 $ bishiiba
Canle Kindle Bücher ma siin kartaa daaqad kale oo dakhliga kale ee Blogger?
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30.000 bishiiba kaliya
26 منشئو المواقع المجانية في المواقع المذهلة
Prémiové weby s tématem WordPress, díky nimž vaše firma vynikne
Rrjeti Virtual Privat (VPN): Tari-dalana tena tsara ho an’ny mpanaradia
A / B-Tests – Deel 2: De Technesch How Tos
Domeeninime eelarvestamine tippdomeeni hinnatõusu ja kriisi vahel
Cəmiyyət Media Təhlükəsizlik: 5 zalakası ar İnfluencer bilməsi lazımdır
Shikoni faqen e internetit të Wikipedia-së dhe të internetit që nxit pjellorinë
مجموعه آیکون WHSR – بارگیری 1،200 ، XNUMX + نمادهای اصلی به صورت رایگان
Si të lëvizni sitin tuaj të WordPress.com në një mjedis të vetë-strehuar
Asirin Rubuta Rubutuni ajaveeb wanda ba zai iya yiwuwa ba
Kif Ibda-blog vir suksesvol, deel 2: Promosie en monetizzazzjoni
Безопасност на социалните медии: 5 опасности, които всеки инфлуенсън трябва да знае
Die eenvoudige beleid (en koekie) beleidsgids vir webwerf-eienaars
4个示例Tsamba Dzakashandura邮件列表Vanyoresa vatengi
Pro домейн имена, Ut emeret домейн номенклатури
Si Firedrop përdori popullaritetin në rritje të A.I. për të fituar 4,000 përdorues para se të filloni